सांसद विकास कोषको रकम बुवा र ससुरालाइ ! – Sajha Bisaunee
सांसद विकास कोषको रकम बुवा र ससुरालाइ !
सुर्खेत क्षेत्र नम्बर ३ का सांसद तप्तबहादुर विष्टले निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमअन्तर्गत दुई वर्ष गाजुल विष्ट र नरबहादुर माझीको नाउमा खोलिएका प्रतिष्ठानहरूलाई २२/२२ लाख रुपैयाँ बजेट वितरण गरे । गाजलु सांसद विष्टका बुवा र माझी नातामा ससुरा पर्छन् । गाजलु विष्ट प्रतिष्ठानमा उनले भाइलाई अध्यक्ष बनाए । तातापानी र गुुटुस्थित प्रतिष्ठानहरूका नाउमा जग्गा नभए पनि विष्टले आफ्नै जग्गामा बर्षेनि ११/११ लाख रुपैयाँका दुई भवन बनाए ।
क्षेत्र नं १ का सांसद पूर्णबहादुर खड्काले कोषको पैसामा ‘नेपाली कांग्रेस सांसद छात्रवृत्ति’ नामक अक्षयकोष खडा गरेका छन् । ६ कक्षादेखि उच्च शिक्षासम्म अध्ययनरत २ सय १ विद्यार्थीलाई वर्षेनि छात्रवृत्ति वितरण गर्दै आएका छन् ।
प्रकाशित मितिः १६ पुष २०७३, शनिबार १३:०८